Duqa Muqdisho oo sheegay in Aqalka Sare lagu dhisay boob iyo sharci darro - Caasimada Online
Home Warar Duqa Muqdisho oo sheegay in Aqalka Sare lagu dhisay boob iyo sharci...
Duqa Muqdisho oo sheegay in Aqalka Sare lagu dhisay boob iyo sharci darro
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho oo la hadlayey wariyeyaasha ayaa sheegay in markii horeba dhismaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya loo maray si sharci darro ah, sida uu hadalka u dhigay.
Cumar Filish ayaa shaaca ka qaaday in aan loo marin hannaanka awood qeybsiga ee 4.5. isla-markaana beelaha qaar la siiyey xubno badan, halka kuwa kalena lagu tuntay xuqooda, isagoo carabka ku dhuftay inay tahay cadaalad darro horey loo sameeyey.
Sidoo kale wuxuu duqa magaalada Muqdisho tilmaamay in dad leh dano gaar ah ay Aqalkani ku dhiseen deg deg iyo boob.
“Waxaay aheyd in wixii la dhisaayo oo awood qeybsi ah in 4.5 lagu qeybsado ama tirada gobolada lagu qeyb sado intaba lama sameyn, beel waxay qaadatay 8 midna 17, taas ayaa horta jirta marka beeshii 17 heysatay waxay rabtaa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro,” ayuu yiri Mudane Cumar Maxamuud Mqaxamed (Filish).
Si kastaba hadalka kasoo yeeray duqa magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya, xilli gobolka Banaadir illaa 13 xubnood laga siiyey xubnaha Golaha Aqalka Sare oo ay u ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.